Ukhenketho lweCaribbean luKhuselekile ngokuHamba ngeHambo
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Caribbean » Ukhenketho lweCaribbean luKhuselekile ngokuHamba ngeHambo
Airlines • isikhululo • Iindaba zeManyano • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Caribbean • Ukubambisa • Icandelo lokungenisa izihambi • Iihotele kunye neeholide • Iindaba zeLuxury • iindaba • Ukwakha kwakhona • Resorts • Xanduva • Shopping • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • Iindaba ezahlukeneyo
Idatha evela kumalungu angamalungu oMbutho wezoKhenketho kwiCaribbean acebisa ukubuyela umva kwesilayidi esaqala ukuphela kuka-Matshi 2020.
Amazwe e-CTO asebenze ngokungakhathali ukugcina i-coronavirus kunye nokuvula kwakhona uqoqosho lwabo.
I-Caribbean iqala ukubuyisela umva isilayidi esaqala ukuphela kuka-Matshi 2020.
Kukho ubungqina obandayo bokuba ipent-up ibango ibuyela emva kwangoko kwaye ngokukhawuleza okukhulu kunokuba bekuxelwe kwangaphambili.
Ngexesha lehlobo lowe-2021 liqhubeka, kukho ubungqina obandayo kwindawo yentengiso yokuba imfuno yokungena-ngaphakathi iyangxola emva kwangoko kwaye ngesantya esikhawulezayo kunokuba bebexele kwangaphambili. Kwangelo xesha, i Umbutho wezoKhenketho kwiCaribbean (CTO) Kuyakhuthazwa yidatha evela kumazwe ethu angamalungu, asebenze ngokungakhathaliyo ene-coronavirus kunye nokuvula kwakhona uqoqosho lwabo.
Nangona ngaphezulu, ukwehla kweepesenti ezingama-60 kwikota yokuqala ka-2021, xa kuthelekiswa nexesha elifanayo kunyaka ophelileyo, kusenokubonakala kungakhuthazi, uvavanyo olusondeleyo luya kuphakamisa ukuba iCaribbean iqala ukubuyisela umva isilayidi esiqale ukuphela kuka-Matshi 2020.
Oku kuboniswa kukuhla kwamanqanaba okwehla kweCaribbean kwiinyanga ezilishumi elinesihlanu ezidlulileyo. Ikota yokuqala yowama-2020 yayilixesha lokugqibela lamanqanaba aqhelekileyo okuhamba, xa i-7.3 yezigidi zamazwe aphesheya ngobusuku (abatyeleli) batyelele le ngingqi. NgoJanuwari nangoFebruwari 2021, abo bafikayo kuloo mmandla bancipha ngeepesenti ezingaphezu kwe-71 xa kuthelekiswa neenyanga ezimbini zonyaka ophelileyo. Nangona kunjalo, ukwehla nge-16.5 yepesenti ngo-Matshi 2021 xa kuthelekiswa noMatshi 2020 luphawu lwenqanaba lokuguqula imeko yokwehla kwamanani okufika kwabakhenkethi.
Idatha eqokelelwe kwiindawo ezilishumi elinambini zokufika kwabakhenkethi ngo-Epreli 2021 ibonisa ukuba nganye yezi ndawo ibhalisile ukukhula, xa kuthelekiswa no-Epreli 2020, xa ukhenketho lwancitshiswa kwihlabathi liphela. Kwangokunjalo, abakhenkethi abafikayo babuya babuya kwiindawo zokufaka ingxelo yedatha kaMeyi. Kufuneka kubonisiwe, nangona kunjalo, ukuba inani labakhenkethi abahleli ngaphezulu kwamaqondo ahambelana nawo ngo-2019.
Iingxelo zamva nje ezenziwe ngabadlali abaphambili beenqwelomoya ababonisa indawo ebalulekileyo yentengiso yeCaribbean, ziye zakhuthaza. Ngexesha kuthotho lwethu lwamva nje lweengxoxo ezikwi-Intanethi, zombini i-CEO ye Airways British, USean Doyle, kunye ne-VP yokuthengisa iiCaribbean kwiAmerican Airlines, uChristine Valls, bathethe ngamanqanaba aphezulu anomdla wokuhamba ukuya kulo mmandla. Ngapha koko, UNks. I-American Airlines ixelele i-CTO kule veki ukuba yongeze iindlela ezintlanu kwiCaribbean kweli hlobo, kunye neyesithandathu eza kongezwa ngo-Novemba-kwaye izakusebenza kwiindawo ezingama-60 kwiCaribbean.
Ngokusekwe kwezi zikhombisi, i-CTO ikhuselwe ngokuqinisekileyo malunga nethemba lokuhamba ehlotyeni, nangokuphela konyaka ukuya kwi-2022.
Kuyaziwa ukuba nakuphi na ukuthembela kufuneka kuncitshiswe yinto yokuba iimeko ezintsha ze-COVID-19 zikhula ngokukhawuleza e-UK nase-US, ezimbini zeemarike eziphambili zeCaribbean. Le yimiqondiso yokuba intsholongwane ihlala isisongelo esikhulu esinokuthi sikhawuleze sibuyekeze nayiphi na inkqubela esele siyenzile.